Nigerian man allegedly raped to death by his six jealous wives
သူ့ ရဲ့ ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောမှုနဲ့ ငွေကြေးဓနဥစ္စာကြွယ်ဝမှုက သူ့ မှာဇနီးမယား ၆ ယောက်အ
သူရဲ့ မကုန်ခမ်းနိုင်တဲ့ အချစ်ကြီးချစ်မှုတွေကိုလည်း အပ်ဂ်ဘပ်ဂ်ဘူ အိုဝပ်ပါ ဒေသရှိ အလှဆုံး
အချောဆုံးဆိုတဲ့ အမျိူးသမီးငယ်၊ မိန်းကလေးတွေကို ဖြန့် ကျဲပေးအပ်ခဲ့ လေပြီ...
နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ၊ဘီနူးပြည်နယ်၊ အော့ဂ်ဘာဒီဘို နယ်မှ အူရိုကိုအိုနိုဂျာ အမည်ရှိသူ ကိုဖိုးစွံတစ်
ယောက်တော့ ၎င်းရဲ့ ချစ်ခြင်းငယ်ပြိုင်မယ်၊ ချစ်မေတ္တာဘယ်မခမ်း ဆိုရမယ့် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး
အနိုင်မခံအရှုံးမပေးစိတ်ရှိကြတဲ့ ဇနီးမယား ၆ ယောက်ရဲ့ သံသာလေကမ်းတိုင် လှမ်းပြိုင်တူပျော်
မယ် စိတ်ထားကြောင့် သူတို့ လေးတွေရဲ့ ၇မက်ဆန္ဒကိုဖြည့် ဆည်းပေးယင်း လှေလှောင်ယင်း
တက်ကျိူးရတဲ့ အဖြစ်နဲ့ ဆုံကာ အိပ်ယာပေါ်မှာတင် အသက်ပျောက်ခဲ့ ရပါတယ်...
ဒုက္ခအားလုံးရဲ့ အစကတော့ လွန်ခဲ့ သည့် အင်္ဂါနေ့ နံနက် ၃ နာရီတိတိမှာပဲ အပ်ဂ်ဘပ်ဂ်ဘူ ဒေ
သရဲ့ နာမည်ကျော်ပျော်ပါးသောက်စားရာ အိုချန်ဂျာနေရာက ပြန်လာတဲ့ အူရိုကိုတစ်ယောက်
သူ့ ရဲ့ အငယ်ဆုံးဇနီးလေးရှိရာအခန်းထဲ ၀င်သွားခဲ့ ပါတယ်...
မင်းတို့ ရဲ့ ... ချစ်ခြင်းရဲ့ အသက်သေ...
အူရိုကို ပြန်မလာခင်မှာပဲ တစ်ခြားဇနီးမယားအားလုံးဟာ အချင်းချင်းတိုင်ပင်စည်းရုံးထားခဲ့ ကြ
ပြီးနောက်ထိုအချိန်မှာပဲ သူမရဲ့ အခန်းထဲကို ဓါးတွေ၊ ဒုတ်တွေကိုင်ဆောင်ပြီးဝင်ရောက်လာခဲ့ 
ကြပြီး ၎င်းတို့ အားလုံးနှင့် တစ်ကြိမ်တစ်ခါစီလောက်တော့ ဖြင့် ချစ်တင်းနှောဖို့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူအား
တောင်းဆိုခဲ့ ကြပါတယ်လို့ အငယ်ဆုံး ဇနီးလေး အိုဒါချီ ကပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
ထိုသို့ တောင်းဆိုတိုက်ပွဲကို ခုခံငြင်းဆန်ခဲ့ သည့် အူရိုကို ခမျာလည်း ၅ ယောက် ၁ ယောက်မို့ 
အင်အားချင်းမမျှပဲ အလျော့ ပေးခဲ့ ရပြီး ထိုအမျိူးသမီးများက ၎င်းအား အငယ်ဆုံးဇနီးမှစပြီးငယ်
စဉ်ကြီးလိုက်၊ ပြောင်းပြန်အစဉ်လိုက် ချစ်တင်းနှောရန် စေခိုင်းခဲ့ ကြပါတယ်...
ပဉ္စမမြောက်ဇနီး အဆင်သင့် ပြင်နေစဉ်မှာပဲ အူရိုကိုတစ်ယောက် အသက်ရှူရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ ရ
" ကျွန်မခင်ပွန်းဟာ ရုတ်တရက်ပဲ အသက်ရှူတာရပ်ဆိုင်းသွားပါတော့ တယ်... ၎င်းတို့ အားလုံး
ဒါပေမယ့် ကျွန်မသူ့ ကိုအသက်ပြန်ရှူအောင်မလုပ်နိုင်တာလည်းသိသွားကြရော သူတို့ အားလုံး
တောထဲပြေးကုန်ကြတာပါပဲ..." လို့ အမြတ်နိုးဆုံးဇနီးလေးကဆိုပါတယ်...
ယခုအထိတော့ ၂ ယောက်သောဇနီးမယားများကိုဖမ်းဆီထားမိရပါပြီလို့ ဆိုပါတယ်...
His fame and financial breakthrough pushed him into having up to six wives. His love for sex equally contributed to his patronage of the most beautiful girls in Ugbugbu Owukpa, Ogbadibo Local government area of Benue State whereaman who was identified as Uroko Onoja was allegedly raped to death by his6jealous wives in the early hours of Tuesday.
Uroko stopped breathing when the fifth wife was making her way to the bed. "Suddenly, my husband stopped breathing, and they all ran out, still laughing, but when they saw that I could not resuscitate him, they all ran into the forest." Currently, two of the wives have been arrested.
Posted by peter kyaw | at 3:53 AM |
Labels: news: www.nigeriadaily.net
ထူးထွေသည့် အံ့ရာသော ပါလား ... ကိုပီတာ ... :)